Daawo: Dhacdo Bulshada ka yaabisay oo Mombasa ka dhacday Maanta, RAG Gaadhi Xaday oo ay Haweenay Sixirtay | Entertainment and News Site
Home » News » Daawo: Dhacdo Bulshada ka yaabisay oo Mombasa ka dhacday Maanta, RAG Gaadhi Xaday oo ay Haweenay Sixirtay
Daawo: Dhacdo Bulshada ka yaabisay oo Mombasa ka dhacday Maanta, RAG Gaadhi Xaday oo ay Haweenay Sixirtay
daajis.com:- Labo nin oo qaawan ayaa maanta socod ku maray wadooyinka Mombasa, waxaa la sheegay in ragaasi la sixray kadib markii ay gaadhi xadeen, sida uu daabacay wargeyska The Standard.
Nin gaadhi laga xaday ayaa u tegay Islaan wax sixirta, waxaana uu siiyey lacag kun doolar ah, kadib markii ay u ballan qaaday in hadii lacagtaasi la siiyo ay sixreyso tuugtii kadibna la arki doono iyagoo qaawan oo suuqa maraya.
Saaka subaxdii ayaa la arkay labo nin oo qaawan oo mid ka mid ah mas qoorta surtay, kadibna waxay mashquuliyiin isu socodka wadooyinka qaar, dadkii ayaa ragaasi ku mashquulay, waxaana ugu danbeyn la geeyay saldhiga.
Haweenayda sixirtay ragan ayaa ragii ka kaxeysay saldhiga oo sheegtay inay geynayso gurigeeda si ay sixirka uga soo saarto, inkastoo Booliisku sheegay in ay tahay arrin u eg mid la jilay, hadana arrintan waxay noqotay sheekada ugu hadal heynta badan maanta Mombasa. waxaana aad uga hadlay baraha bulshada iyo dadka isugu yimaada goobaha bulshada.